तपाईंको अतिथि ब्लगर चेकलिस्ट | Martech Zone
बुधवार, जनवरी,, २०१२ शनिबार, जनवरी 2, 2021 Douglas Karr
एसईओ कम्पनीहरूले खोजी ईन्जिन परिणामहरू चलाउन र हेरफेर गर्न जारी राख्छ ... यो रोक्दैन। गुगलको म्याट कट्सले एक महान पोष्ट लेखे, एसईओ को लागी अतिथि ब्लगिंग को क्षय र गिरावट पाहुना ब्लगिंगमा उसको स्ट्यान्डमा एक भिडियो समावेश छ र म्याटले यसलाई तलको रेखाको रूपमा प्रदान गर्दछ:
म केवल हाईलाईट गर्न चाहन्छु कि कम क्वालिटी वा स्प्याम साइटहरूको एउटा समूहले उनीहरूको लिंक निर्माण रणनीतिको रूपमा "पाहुना ब्लगिंग" मा हेरेको छ, र हामी पाहुना ब्लगि do गर्ने धेरै धेरै स्पामी प्रयासहरू देख्छौं। त्यस कारणले गर्दा, म शंकाको सिफारिस गर्दछु (वा कम्तिमा सावधानी) जब कसैले पुग्छ र तपाईंलाई पाहुना ब्लग लेख प्रस्ताव गर्दछ।
हामी भर्खरै बहिष्कार यहाँ एक अतिथि ब्लगर Martech Zone। उनी मार्केटिंग उद्योगमा बढी बढी प्रदर्शन गर्न चाहान्छिन् र हाम्रो लागि केहि गहिराइ लेख लेख्ने आशा राख्दै लेखक हामीकहाँ आए। हामीले उनलाई पहुँच प्रदान गर्यौं र उनले पहिलो पोष्ट लेखे।
म शंका थियो। पोष्ट सामग्रीमा भित्र मुठ्ठीभर लिंकहरू थिए ... केहि पर्याप्त सामान्य थियो तर एउटा एकदम विशिष्ट थियो र म चिन्तित थिए। हामी पहिले नै आउटबाउन्ड सामग्रीमा नफोलो लिंकहरू लागू गर्दै थियौं, तर म अझै यो तथ्यलाई हल्लाउन सक्दिन कि यो धेरै लक्षित सामग्री थिएन ... धेरै लक्षित लिंकहरूको साथ। लेखकका दुई थप लेखहरू र मैले केही अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्‍यो।
मैले उनको ट्विटर प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल, गुगल + प्रोफाइल र वेब मार्फत अन्य लेख समीक्षा गरें। प्रत्येक एकदम विरलै थियो… कुनै व्यक्तिगत कुराकानी, कुनै साथीहरू, र उनी कहाँबाट आएकी थिई वा अहिले नै बस्छिन् भनेर केहि प्रश्न। उनी आफ्नो लेख अनलाइन संग्रहको बावजूद काल्पनिक चरित्रको रूपमा देखिन्छन्। अवश्य पनि, म पक्का छैन कि ऊ सहि सर्वनाम हो कि होइन।
अन्तिम पुल भनेको त्यो हो कि मैले उनलाई ड्राइभर इजाजतपत्रको प्रतिलिपि मागें। उनले लेखी र भने कि उनी यति धेरै निजी जानकारी प्रदान गर्न सहज थिइनन्। मैले निजी जानकारीको लागि कहिले पनि सोधेनन ... उनले आफ्नो घरको ठेगाना र कुनै पनि व्यक्तिगत डेटा ढाक्न सक्छिन्। म केवल पहिचान को प्रमाण चाहान्छु। यसको साथ, मैले उनको पोष्टबाट सबै लिंक हटाएँ र उनको लगईन प्रमाणहरू परिवर्तन गरें।
त्यसैले ... यहाँ बाट बाहिर, मेरो चेकलिस्ट यहाँ छ:
औपचारिक पहिचान - यो ब्ल्ग मेरो अनलाइन अधिकार हो र मैले निम्न पनी राख्न र बढाउनको लागि एक्सपोजर, सम्मान र गुण कायम गर्न आवश्यक छ। म केहि ब्याकलिंकरमा यसलाई जोखिममा लिन सक्दिन।
उपयोग नियम - हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि हाम्रो लेखकहरूलाई सबै थाहा छ हाम्रो ब्लगको लक्ष्य के हो - मार्केटर्सलाई उपकरण र टेक्नोलोजीले कसरी तिनीहरूको मार्केटिंग प्रयासलाई असर गर्न सक्छ भन्ने अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ। यो बेच्न वा ब्याकलिink्क होईन! कुनै पनि अन्य सामग्री हटाइनेछ र लेखकलाई हटाइनेछ।
योगदानकर्ता भूमिकाहरू - हाम्रा सबै लेखकहरू योगदानकर्ताहरू द्वारा सुरु हुन्छ ... जसको अर्थ उनीहरू सामग्री लेख्न सक्दछन् तर आफैमा यो प्रकाशित गर्न सक्दैनन्। हामी उनीहरूका लेखहरू समीक्षा र प्रकाशित गर्नेछौं जतिखेर हामी सहज हुँदैनौं उनीहरूले के गरिरहेछन् भन्ने कुरा बुझ्दैनन्।
पूर्ण प्रकटीकरण - यदि हामी बीच कुनै सशुल्क सम्बन्ध छ, सामग्री लेखक, र पोष्ट बीचमा प्रदान गरिएको संसाधनहरू - ती सम्बन्धहरू पाठकलाई खुलासा गरिनेछ। हामी हाम्रो प्रायोजकहरू वा उत्पादनहरू र सेवाहरू को लागी हामी सम्बद्ध छौं को बारे मा सामग्री प्रदान गर्न आपत्ति छैन ... तर हाम्रो दर्शकहरु लाई थाहा हुनुपर्छ कि त्यहाँ एक सम्बन्ध छ।
Nofollow - सबै लिंकहरू अतिथि पोष्टहरूमा खाली छोडिनेछन्। कुनै अपवाद छैन। तपाईंको लक्ष्य हाम्रो व्यापक श्रोताको साथ पुग्ने र एक्सपोजर प्राप्त गर्न र निम्न हुनुपर्दछ - SEO का लागि ब्याकलिinking्क होइन। हाम्रो प्राथमिकताहरू सीधा राख्नुहोस्।
प्रमाणित छविहरू - कुनै पनि दृश्य सामग्री इजाजतपत्र दिईनेछ। यदि हाम्रो अतिथि ब्लगरसँग एक संसाधन छैन, हामी हाम्रो प्रयोग गर्नेछौं शेयर फोटो र भिडियो संसाधन। म स्टक फोटो सेवाबाट जबरन चन्दा बन्ने छैन किनकि एक अतिथि ब्लगरले गुगल छवि खोजीबाट छवि लिईस।
अनौंठो सामग्री - हामी अन्य स्रोतबाट सामग्री सिंडिकेट छैन। हामी लेख्ने सबै अद्वितीय छन्। जब हामी इन्फोग्राफिक्स साझा गर्दछौं, यो सँग एक लेख छ जुन हाम्रो दर्शकहरूको लागि अद्वितीय छ।
तपाईंको ब्लगमा तपाईंको पाहुना ब्लगि program कार्यक्रमले खोजी र सामाजिकको साथ तपाईंको अनलाइन प्रतिष्ठा र अख्तियारलाई चोट पुर्‍याइरहेको छैन भनेर सुनिश्चित गर्न तपाईं अरू के उपायहरू लिनुहुन्छ?
टैग: ब्याकलिink्क रणनीतिbacklinksनक्कलीपाहुना ब्लगरएसईओ
मार्स 26, 2014 मा 3: 10 एएम
राम्रो काम डगलस, यो एक महान र अधिक प्राकृतिक पोस्ट हो कि यी ब्लगरहरूले अतिथि ब्लगिङसँग के गर्छन्। मलाई थाहा छैन किन तपाईंले आफ्नो ब्लगमा अतिथि पोस्ट लेख्न प्रस्ताव गर्नु अघि यी दिशानिर्देशहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभएन। हामी सबैलाई थाहा छ कि यी दिशानिर्देशहरू अनिवार्य छन् र कसैलाई पनि तपाईंको ब्लगमा अतिथि ब्लग लेख्न अनुमति दिनु अघि हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ।